Ikamelo elikhulu elithandekayo elinamakamelo kanye nendawo yokungena okungeyakho - I-Airbnb
Ikamelo elikhulu elithandekayo elinamakamelo kanye nendawo yokungena okungeyakho
157 okushiwo abanye
Devon, England, i-United Kingdom
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Ruth
U-Ruth Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela ekhaya lethu lika-Victoria edolobheni elihle elisogwini lase-Teignmouth, e-South Devon.
Sihamba nje imizuzu engu-10 ukusuka ebhishi elingemuva, namaphabhu ayo, umculo obukhoma, i-quayside, imidlalo yasemanzini kanye nobuhle, inkaba yedolobha enekota yobuciko kanye nengaphambili lolwandle kanye ne-pier yayo, ibhishi kanye negalofu elihle.
Ikamelo lakho lineshawa engaphakathi, itiye nekhofi elenza ifriji, i-microwave ne-TV, elinosofa omncane onendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela nokusetshenziswa kwengadi yethu enhle eseceleni
Ikamelo lakho lokulala elilala abantu ababili elikhulu linetimu yasogwini, umbhede omkhulu, indawo yokuhlala ethokomele, ikhabethe elinetiye nekhofi elenza ifriji, i-microwave ne-TV ene-freeview. Uzokwazi ukungena ekamelweni lakho langasese elineshawa nendlu yangasese. Amathawula antofontofo, i-shampoo nensipho kuyatholakala. Ikamelo libheke ngaphandle engadini yethu ebiyelwe ngodonga.
I-Wifi – 39 Mbps
4.82 out of 5 stars from 157 reviews
4.82 · 157 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-157
Sitholakala nje ukuhambahamba imizuzu engu-10 ukusuka olwandle, ibhishi elingemuva kanye nenkaba yedolobha. Uma ungakaze uye e-Teignmouth ngaphambilini singatusa izindawo esizithandayo zokudla nokuphuza lapho ufika. Asikho isidingo samaphabhu (ikakhulukazi ogwini olungemuva), amathilomu noma izitolo zezinhlanzi nama-chip ongazijabulela! Phakathi nemizuzu engu-5 uhamba ngezinyawo yi-Tesco Express kanye nendawo yokuzivocavoca enakho konke etholakala e-Teignmouth Community School eseduze.
Ujoyine ngo-Mashi 2013
Hi, my name is Ruth, I live in Devon with my husband and son. I enjoy the more homely feel of staying in Airbnb rather than hotels when travelling away from home, hence I now host as well.
Ngisebenza futhi ngizoba ngaphakathi nangaphandle ngezikhathi ezahlukene ngokususelwa ohlelweni lwethu. Uma sise-, cishe sizoba sekhishini noma emakamelweni okuphumula futhi sitholakale kunoma yini oyidingayo futhi sijabule kakhulu ukusiza nganoma yimiphi imininingwane noma isiqondiso esidingekayo endaweni. I-Milo ikati lizotholakala kuma-cuddles phakathi nosuku.
Ngisebenza futhi ngizoba ngaphakathi nangaphandle ngezikhathi ezahlukene ngokususelwa ohlelweni lwethu. Uma sise-, cishe sizoba sekhishini noma emakamelweni okuphumula futhi sithol…
URuth Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Devon namaphethelo